Nhau - Zvese Zvaunofanirwa Kuziva Nezve Gravity Separator
Tese tinoziva kuti kukura kwehuremu hwembeu ndiko kuwedzera kukura kwayo, simba negoho. Naizvozvo, chinopatsanura giravhiti inoita basa rakakosha mukugadzika mbeu nehuremu muindasitiri yekugadzira mbeu. Saka yakawanda sei iwe yaunoziva nezve giravhiti separators?
Chii chinonzi Gravity Separator?
Gravity separators anoshandiswa kupatsanura zvigadzirwa zvehukuru hwakafanana asi akasiyana chaiwo giravhiti. Vanokwanisa kubvisa zvakadyiwa zvishoma, zvisati zvakura, chirwere chezvipembenene uye mhodzi dzine chakuvhe kubva mumhodzi kuti dzive nechokwadi chemhando yepamusoro yechigadzirwa chekupedzisira. Nzira dzechinyakare dzekuchenesa mbeu dzekuchenesa mhodzi nemadhiramu ane mabhodhoro dzakaratidza kusashanda. Inogona kushandiswa kuparadzanisa uye kuenzanisa kofi, nzungu, chibage, pizi, mupunga, gorosi, sesame uye zvimwe zviyo.
Chii chinonzi Working Principle yeGravity Separator?
Gravity separation inzira yeindasitiri yekuparadzanisa zvikamu zviviri, kungave kuturika, kana musanganiswa wakaoma wegranular uko kunopatsanura zvikamu negiravhiti.
Zvikamu zvemusanganiswa zvine huremu hwakasiyana hwakasiyana. Uye nzira dzose dzesimba rinokwevera zvinhu dzakajairika mupfungwa yokuti dzose dzinoshandisa simba rinokwevera zvinhu pasi sesimba guru.
Imwe mhando yegiravhiti inoparadzanisa inosimudza zvinhu nekupukuta pamusoro pechidzitiro chinozunguzika chakavharwa. Izvi zvinoita kuti zvinhu zvirembedzwe mumhepo nepo tsvina inorema ichisara pachiratidziri uye ichiburitswa kubva mudura rematombo. Chigadzirwa chacho chinoyerera pamusoro petafura inozunguza apo mweya wakamanikidzwa unomanikidzirwa kuburikidza, zvichiita kuti zvinhu zvigadzikane zvichienderana nehukuru hwayo. Zvimedu zvinorema zvinoenda kune imwe nzvimbo yakakwirira, nepo zvidimbu zvakareruka zvichienda kune imwe yakaderera yetafura.
Kuti uwane kupatsanurwa kwakasimba kwesimba rinokwevera, mhepo yakamanikidzwa inoda kunyatsogadziriswa. Izvi zvinowanikwa nekushandisa ega mafeni anochinjika kuti adzore kugoverwa kwemhepo munzvimbo dzakasiyana dzedeki inozunguza.
Iyi mhando yegiravhiti yekuparadzanisa ine rectangular deck kuitira kuti chigadzirwa chifambe chinhambwe chakareba zvichikonzera kupatsanurwa kwakachena kwemavara uye anorema.
5XZ-10 Gravity Separator Ine Mhepo Inovhuvhuta Type
Maindasitiri ekushandisa eGravity Separator
Kupatsanurwa kwegiravhiti kunoshandiswa mumhando dzakasiyana siyana dzemaindasitiri, iyo yakanyanya kuwanda uye huru ndima ndeyekurima.
Gravity separators anoshandiswa pakubvisa tsvina, admixture, kukuvara kwezvipembenene uye mbeu dzisina kukura kubva mumienzaniso inotevera: gorosi, bhari, kubatwa kwemafuta, peas, bhinzi, cocoa bhinzi, linseed. Inogona kushandiswa kuparadzanisa uye kuenzanisa bhinzi dzekofi, bhinzi dzekoko, nzungu, chibage, pizi, mupunga, gorosi, sesame uye zvimwe zviyo zvekudya.
Zvimiro zveGravity Separator
Inogona kuparadzanisa zviri nyore zvinhu zvegranular zvichienderana nehuremu hwechigadzirwa.
Easy deck kubviswa kwekuchenesa.
Kugadziridzwa kuri nyore kwedhizari kurerekera mune ese ari maviri longitudinal uye akachinjika nzira.
Multi-fan system yekutonga kwakaringana kwemhepo.
Chaiyo Kudzora kwemhepo, chiyero chekudyisa uye kumhanya kwedeki kufamba.
*Kuderedza kushanda kwevanhu
*Kunyanya kupatsanurwa kwakanaka
* Kugona kunyatso sarudza uye kupatsanura
*Kuparadzaniswa kwezvinosvibisa kunovandudza kunaka kwechigadzirwa
*Kuderedza njodzi dzehutano hwevatengi
SYNMEC ine marudzi akasiyana-siyana emagetsi ekuparadzanisa emhando yepamusoro yekutengesa, uye kana uchida kudzidza zvakawanda pamusoro pezvigadzirwa zvedu, tapota taura nesu!